Goobaha laga codeynayo doorashada madaxaweyne ee ku celiska ah oo Kenya ka furmay -
Goobaha laga codeynayo doorashada madaxaweyne ee ku celiska ah oo Kenya ka furmay
Waxaa dalka Kenya ka furmay saaka goobaha looga codeynayo doorashada madaxweyne ee ku celiska ah.
Doorashada maanta oo ay bisha October tahay 26, 2017 ka dhacaysa dalka Kenya ayaa waxaa loogu codeynayaa qofkii madaxweyne ka noqonlahaa dalka Kenya.
Raila Odinga oo isagu ah hogaamiyaha iyo musharaxa xisbiga mucaaradka ee Nasa ayaa isagu diiday in uu ka qeybqaato doorashadan ku celiska ah ee maanta dhacaysa.
Raila Odinga ayaa ku booriyey una sheegay taageerayaasha xisbiga Nasa in ay guryahooda joogaan oo ayna ka qeybqaadan doorashada.
Waxaa cabsi badan laga qabaa in rabshado iyo isku dhac ay ka dhashaan doorashadan ku celiska ah iyo waliba natiijada ka soo baxda maadaama uu xisbiga mucaaradka ugu weyn iyo hogaamiyeyaashoodu ay diideen in ay ka qayb qaataan doorashada.
Bahda caalamka oo uu hogaaminayo dalka Mareykanka ayaa ku dhiiri geliyey shicibka iyo hogaamiyeyaasha dalka Kenya in ay Sharciga dalka u hogaansamaan, nabadda iyo danta dalka Kenya ka taliyaan.
Dhamaan goobaha ganacsiga iyo gaadiidkii u kala gooshayey dalka gudihiisa ayaa xiran. Cuntadiina sixir barar baaxad weyn leh ayaa ku yimid. Dhamaan dadka ku dhaqan dalka Kenya oo ay Soomaalidu kamid tahay ayaa wadnaha farta ku haya.
Related Items:Featured, Kenya elections, world
City Council is forced to pay out more than $1.8 million for a compensation claim due to a pothole